लगातार ५ बर्ष प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुने गरि सहमति भयो हेर्नुहोस ५० / ५० अशंबन्डा के भयो त ? - Sudur Khabar
लगातार ५ बर्ष प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्ड नै हुने गरि सहमति भयो हेर्नुहोस ५० / ५० अशंबन्डा के भयो त ?
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार १५:४८
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डबीचको एक्लाएक्लै भएको भेटवार्ता सम्पन्न भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज विहान ११ बजेदेखि साँढे १ बजेसम्म भएको एक्लाएक्लै वार्ता पार्टी एकताबारे समझदारी कायम गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
गत चैत्र २२ मा बसेको एमाले–माओवादी सम्मिलित वाम गठबन्धनको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले बैसाख ९ गते पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो। यही पेरिफेरीमा दुई नेताहरुबीच आज एक्लाएक्लै भेटवार्ता भएको हो ।
आजको बैठकमा नेतृत्व र संगठनात्मक प्रतिनिधित्वका लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । त्यस्तै एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न, जनयुद्ध र जबजको विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ।
आजको वार्तामा दुई नेताबीच पार्टी एकता जसरीपनि सम्पन्न गर्ने समझदारी कायम भएको छ । त्यस्तै दुवै पार्टी बराबरीकै अनुपातमा एकता गर्नेपनि ओली–प्रचण्डबीच समझदारी बनेको छ। तर, आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने बारेमा भने मौन रहने समझदारी बनेको एक सूत्रले जनाएको छ ।
सकेसम्म बैशाख ९ गते नै एकता घोषणा गर्ने उनीहरुबीच समझदारी पनि आजको बैठकमा बनेको छ ।
पार्टी एकता र प्रधानमन्त्री ओलीको हालै सम्पन्न भएको भारत भ्रमणमा केन्द्रित रहेर नेकपा एमाले स्थायी समिति बैठक अहिले केही बेरमै सुरु हुँदैछ ।